Yar / Dhexdhexaad / Muga Sare - Pandawill Technology Co., Ltd.
At Pandawill Circuits, waxaan soo dhaweyneynaa weydiimaha PCB ee mug kasta oo looxyo ah, laga soo bilaabo hal wareeg illaa iyo mugyo waaweyn oo la bixiyo xilli loo qorsheeyay. Sida had iyo jeer ah dadaalkeena oo dhan waa inaan hubinno iyadoo aan loo eegin mugga, waxaad helaysaa guddiyo qiimaha ugu tartanka badan iyo bixinta waqtiga.
Nidaamka aqrinta, xigashada iyo ugu dambeynta keenida PCB-yada waxba kuma kala duwana iyada oo loo eegin mug yar ama weyn oo macaamiisha si siman ayaan u qiimeynaa, si kastaba ha noqotee PCBs waa badeecad 'dhaqaale baaxad leh', taas oo macnaheedu yahay in qiimaha ugu fiican la gaari karo marka aan nahay awood u leh inuu soo saaro dufcadihii ugu waaweynaa ee suurtogalka ahaa.
Looxyada mugga weyn, waxaan ku siineynaa xulasho ama gaarsiinta jadwalka ah ama waxaan kaa caawin karnaa adeegyada maareynta saamiyada si aan u siino dhab ahaan tirada guddiyada saxda ah ee la xiriira qorshahaaga wax soo saarka billaha ah. Waxaan sidoo kale bixinaa kharash keyd ah macaamiishaas diyaarka u ah inay si dhaqso leh uqaataan 100% saamiga maadaama ay noo anfacayso, waana idinla wadaagi doonnaa faa iidadaas.
Pandawill waxay bixin doontaa qiimo ku saleysan wadarta guud ee sanadlaha ah looxyada, laakiin waxay u kala qaybsan tahay tirada wax soosaarka ee mugga waaweyn tiro dhowr dufcadood ah. Tani waxay hubin doontaa in looxyadu ay leeyihiin nolosha ugu dheer ee la heli karo.
Waxaan ku faraxsanahay inaan kugu siino sida ugu habboon uguna dabacsan ee aad ku daboosho baahiyahaaga.